Vane zvipo vana zvakakwana? | Kudzidziswa Kwekuziva
Kunyangwe mukusavapo kwedudziro yakagovaniswa, zvichireva kukwana zvakakwana, zvinenge zvakarongeka tinotaura nezvekumanikidza kuedza kuzadzisa zvinangwa zvepamusoro uye kubudirira. Kuita zvakakwana kunogona kushanda sesimba rekutyaira kubatsira vanhu kuwana hunhu hwepamusoro; izvi, zvakadaro, zvinogona zvakare kudzikisira kuzviona wega mushure mekundikana, izvo zvinogona kudzora kuyedza kweramangwana kubudirira.
Zvisinei kuti ndezvipi chaizvo zvakawanikwa mumabhuku esainzi, zvakajairika kunzwa nezvazvo kukwana kukwana sechinhu chinowanzo fambidzana neyakawandisa endowment; mune izvi, iko kutsvagisa zvedzidzo mune vane zvipo kwakanyatso tarisa kune hunhu sechinhu chinogona kudzivirira kana kufambisa kutaura kwehunyanzvi hwevana vane kugona kwakadzika kwekuziva. Nekudaro, kutsvagisa munzvimbo ino kunowanzo kutungamira kumhedzisiro inopokana, dzimwe nguva kuratidza humwe hunhu hwakatarwa hwekukwana pane avhareji, dzimwe nguva pasina kucherechedza chinhu ichi.
Kugadzirisa mubvunzo, Ogurlu akatsvaga kupfupisa mhedzisiro mhedzisiro yekutsvagisa nezvenyaya iyi kuburikidza ne meta-ongororo1.
Ndeipi yaive mhedzisiro?
Kuisa pamwechete iyo data kubva kune dzakasiyana siyana dzekutsvagisa, zvinoita sekunge iro zano revanhu vane zvipo sevanonyanya kukwana kupfuura avhareji harina chinangwa hwaro. Naizvozvo, kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwezviitiko (vanhu mazana ma1488 vane kugona kugona kuziva uye vanhu mazana maviri nemakumi mairi nemapfumbamwe nevapfumbamwe vane hunyanzvi hwepamoyo), iyo parameter inofungidzirwa kukwana kwakakwana haina kusvika pachikumbaridzo chekukosha kwehuwandu.
Naizvozvo, zvinoenderana neiyi data, zvinoita kunge isingakwanise kufunga nezve kukwana sehunhu chaihwo hwechipo chakawandisa; pachinzvimbo, zvinoita kunge kwakanyatso kurangarira iyo a chinhu chinogona kuvapo mune vane zvipo pamwe nevevamwe vanhu.
Izwi rekuti "kuguma" rakaiswa kumubvunzo here? Muzvokwadi, kwete nekuti tsvagurudzo dzakasiyana dzakatariswa mune ino meta-ongororo dzaive dzakasiyana kwazvo (semuenzaniso, maitiro ekutsanangudza vane zvipo aive akasiyana zvakanyanya) uye nekudaro zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuti uwane mhedzisiro yakajeka.
WISC-IV Mafungidziro eUchenjeri muakananga Kudzidzira Kuremara
Ogurlu, U. (2020). Vane Zvipo Vadzidzi Kukwana? Meta-Ongororo. Zvinyorwa zveIdzidzo yeVakapiwa, 43(3), 227-251.
yakakwirira yekuziva inogona, kugona kwepamusoro kugona uye kukwana, kukwana zvakakwana, pamwe nerupo, chakawanda chipo uye kukwana
Vane zvipo vana zvakakwana?2021-02-282021-02-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/02/i-bambini-plusdotati-sono-perfezionisti.jpg200px200px